Maraykanka iyo xulafadiisa oo duqeeyey Suuriya
Sept 23, 2014 (GO)- Maraykanka iyo qaar kamid wadamada Carabta ee isu bahaystay ladagaalanka IS ayaa markii ugu horreysey duqeeyey fariisimo ciidan oo kooxdaasi ay ku leedahay gudaha dalka Suuriya.
Af-hayeenka Wasaaradda Gaashaan-dhigga Maraykanka (Pentagon-ka) ninka lagu magacaabo John Kirby, ayaa warbaahinta u xaqiijiyey duqeyta ka dhacday Suuriya inkastoo uu ka gaabsaday inuu faah faahin dheeri ah ka bixiyo.
"howlgalladu weli way socdaan, mana joogno xilli munaasib ku ah inaan faah faahin intaas ka badan bixino" John Kirby ayaa sidaas warfidiyeenka u sheegay mar uu shir-saxaafeed ku qabtay xarunta Pentagonka-ka.
Wadamada Carbeed ee ka qayb qaatay duqeynta weli lama shaacin, waxaase loo badinayaa inay yihiin qaar kamid ah wadamada Khaliijka oo iyagu cabsi aad u weyn ka qaba awoodda sii baaheysa ee kooxdaas xagjirka ah.
Laga soo bilaabo bishii August ee lasoo dhaafay, militeriga Maraykanku waxay dalka Ciraaq ka fuliyeen 190 weerar oo dhanka cirka ah, duqeymahaas oo badankooda ay diyaardaha bilaa duuliyaha ahi fuliyeen, waxaa lala bartilmaameedsaday fariisimo ciidan iyo gaadiid dagaal oo kooxda Daacish leedahay.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo labo todobaad kahor jeediyey khudbad xasaasi ah oo uu kaga hadlayey khatarta sii kordheysa ee kooxdan, wuxuu sheegay in Maraykanka ay ka go'an tahay sidii loo wiiqi lahaa awoodda IS iyadoo la adeegsanayo tallaabo kasta oo suurogal ah.